Ady & Fifandirana · Septambra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Ady & Fifandirana · Septambra, 2012
Tantara mikasika ny Ady & Fifandirana tamin'ny Septambra, 2012
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 15 Septambra 2012
Nanameloka ilay fanafihana tsy am-piheverana nahazo ny Kaonsilin'i Etazonia tao Benghazi, Libya tamin'ny alin'ny Talata 11 Septambra 2012 ireo mpikirakira aterineto nanerana ny tontolo Arabo. Amerkana efatra, ka isan'izany ny Ambasadaoro Christopher Stevens, no maty raha nitifitra balafomanga tany aminy ireo mpitolona, nandritra ny fotoana nitondràna azy ho amin'ny toerana azo antoka, taorian'ny fotoana naha-fahirano ny tranoben'ny kaonsily.
Libya: Azafady Ry Chris, Tsy Naharo Anao i Benghazi
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 14 Septambra 2012
Andian'olona Libyana vitsy no nivory teo amin'ny kianja Al Shajara ao Benghazi ny andron'ny 12 Septambra 2012ho fanoherana ny fanafihana tao amin'ny Kaonsilàn'i Etazonia. Amerikana efatra, ka ao anatin'izany ny Ambasadora Christopher Stevens no maty raha nitifitra balafomanga ireo ny mpitolona nandritra ny nitondrana azy ireo tany amin'ny toerana tsara aro kokoa...
Afrika Mainty 12 Septambra 2012
Fanafihan'ny 'drone' Amerikana iray hafa indray no niantraika tamin'i Yemen tamin'ny Alahady, tao Al-Baydha, nikendrena ireo mpitolona efa "noahiahiana" toy ny mahazatra. Ao anatin'izay efa lasa fahazarana ankehitriny, tsy voa izay nokinendry ary araka ny tatitra avy any an-toerana dia sivily 13, ahitàna vehivavy telo no maty.. Mitodika amin'ny Twitter ireo Yemenita mpikirakira aterineto maneho ny hatezeran-dry zareo
Afganistana 03 Septambra 2012
Afrika Mainty 03 Septambra 2012